November | 2015 | HimiloNetwork
Zakariya November 30, 2015	Leave a comment 221 Views
Muqdisho (Himilonews) – Tirada da’yarta u dhimanaysa AIDS-ka ayaa saddex jibbaarantay 15-kii sano ee ugu danbeeyey—halkaas oo badigood uu cudurku haleelay iyaga oo caruur ah, marka loo eego warbixin ay sii deysay UNICEF. AIDS-ku waa tiro kamid ah cudurrada ay u dhintaan da’yarta u dhaxeysa 10—19sano iyo sabab dhimashada labaad ee da’yarta dunida, hey’adda QM u qaabilsan caruurta ayaa ku ...
Zakariya November 30, 2015	Leave a comment 177 Views
Muqdisho – Magaalada Nairobi waa caasimadda dalka Kenya. Waxaa ku nool dad ku dhow laba malyuun oo isugu jira Kenyaati iyo shisheeye. Soomaali badan ayaa ku nool dalka Kenya caasimaddiisa Nairobi halkaas oo ay xirfado kala duwan kaga jiraan howl-maalmeedkeeda. Nairobi waa magac asalkiisu yahay af-Maasai oo marka la micneeyo noqonaysa “kobtii qabowga laheyd.” Caadiyanna, waa sax oraahdaas. Nairobi waa ...
Giriigga: Haween gaajo awgeed jirkooda iibsanaya say cunno ku helaan
Zakariya November 29, 2015	Leave a comment 200 Views
Muqdisho (Himilonews) – Haweenka ku nool Giriiga ayaa lagu sandulleynayaa inay jirkooda ku iibsadaan dhillaysi si loogu badalo xabad kimis ah gudaha dalka dhaqaalihiisu cuuryaamay ee dhaca bariga qaaradda Yurub. Warbixin cusub ayaa caad-dhigtay sida ay ku dhilloobeen haween badan iyaga oo jirkooda ku iibsanaya cunno ay quutaan oo ka yar 1.2 oo ah lacagta Giniga Istarliinka ah. Qoraha warbixintan Gregory ...
Idaacaddii koobaad ee af-Soomaali ah oo laga furay Minnesota
Zakariya November 29, 2015	Leave a comment 167 Views
Minnesota, USA (Himilonews) – Idaacaddii ugu horreysay ee ku hadasha af-Soomaali ayaa laga sii daayay magaalooyinka mataanaha–taas oo Soomaalida ka caawin doonta inay caruurtooda ku duwaan dhaqanka suuban, ladagaalanka maandooriyaha, talo-bixinta iyo xitaa xagjirnimada. KALY oo ah warbaahintii ugu horreysay ee laga diiwaan-galiyo golaha federaalka Maraykanka, waxaa la filayaa inay door ku yeelato kobcinta garaadka da’yarta iyo wacyiga guud ee ...
Zakariya November 28, 2015	Leave a comment 385 Views
Adis Ababa – Ururka ugu weyn QM ee Africa oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaan UNECA ayaa Jimcihii sare uga taagay calanka dalka Falastnin magaalada Adis Ababa oo ah xarunta midowga Africa–taas oo hadda kadib hubaal u siisay dal noqoshada reer Falastin. Daganayaasha magaalada, danjirro iyo madax kala duwan ayaa goob-joog ka ahaa xafladda lagu taagay bandiiradda Falastin halkaas oo heesta qaranka ...
Zakariya November 25, 2015	Leave a comment 328 Views
Moscow, Ruushka (HIMILONEWS) – Nin aan la heyb tilmaamin ayaa guursaday sabaayad “Pizza” kadib jeer uu ku daalay noqoshada kali ahaaneed. Xafladda arooska ayaa ka dhacday xarunta lagu iibiyo sabaayadda oo ku taalla magaalada Tomsk ee koofurta dalka Ruushka. Caruuska cusub ayaa sheegay inaanu dareemeyn macno qoto dheer oo ku saabsan caruusaddiisa “Sabaayadda” hayeeshe uu xal ka doonay xiriirada dhaqameed ee ...
Zakariya November 24, 2015	Leave a comment 218 Views
Muqdisho – Nin ayaa afadiisa ku furay WhatsApp–isaga oo fariin-qoraaleed ahaan ugu diraya–wax ka yar saddex toddobaad oo ay caruus wada ahaayeen–isaga oo la mithaalaya Tufaax. Caruuskan aan la magac-dhebin ayaa xiriir guur la lahaa 21-jirad ah ardayad jaamacadeed–hayeeshe, kumaanu faraxsaneyn. Dhanbaal halhaleel ah oo ay ka heshay xaggiisa ayuu ku yiri: “Waxaad iila mid aheyd Tufaaxa. Waana ku dhadhansaday. ...
Zakariya November 24, 2015	Leave a comment 593 Views
Muqdisho (Himilonews) – Caalamiyan Maalinta Macalimiinta Aduunka ee “ World Teachers’ Day” ayaa waxaa markii ugu horreysay la xusay 5th bishii October ee sanadkii 1994 halkaas oo ay isku yimadeen Ururada Macalimiinta Adduunka. Waxaana ujeeddadu aheyd in la isku abaabulo, lana taageero macalimiinta iyo sidii loogu xaqiijin lahaa Mustaqbalka nolosha Aadanaha. Balse 21—November waxaa loo asteeyey inay tahay Maalinta Macalinka ...
Zakariya November 24, 2015	Leave a comment 221 Views
Muqdisho — Madaxweynaha dalka Bolivia, Evo Morales ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in Israa’iil ay tahay dalka argagaxiso ah oo dhibaato kawada marinka Gaza ee dhulka Reer Falastiin. Morales ayaa xusay in wixii hadda ka dambeeyay ay dadka Israa’iiliyiinta ah ee booqanaya Bolivia looga baahan yahay inay fiiso dalbadaan, isgaoo xusay in la jabiyay heshiis 1972-kii ay wada-galeen Israa’iil iyo ...
Zakariya November 24, 2015	Leave a comment 525 Views
New Delhi, Hindiya (Himilonews) – Ninka aan cidiyihiisa jarin taniyo 1952 ayaa loo aqoonsaday ninka ugu cidiyaha dheer caalamka. Shridhar Chillal ayaa rasmi ahaan u heysta rikoorka cidiyo dheernimo ee dunida. Celcelis ahaan dhirirka cidiyihiisa ayaa gaaraya 909.6 cm. Cidida suulkiisa oo qura ayaa laba mitir wax sii dheer. 78-jirkan ayaa ku faraxsan halgankiisa uu ku galay buugga dhacdooyinka caalamka ...